प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेपछि युवा नेताहरू फायर, को-को छन् बिरोधमा ? — Sanchar Kendra
प्रचण्डले एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेपछि युवा नेताहरू फायर, को-को छन् बिरोधमा ?
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका ५ नेताले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
अरु नेताहरुले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा सहमति दिएपछि त्यही निर्णय भएको छ ।